Ciidamada xoogga Dalka oo maleeshiya ka tirsanaa Al-Shabaab ku dilay Gedo – Radio Muqdisho
Ciidamada xoogga Dalka oo maleeshiya ka tirsanaa Al-Shabaab ku dilay Gedo
Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa Maanta Lix xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxa ay ku dileen agagaarka Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Mohamed Ali Abdullahi, oo ah Taliyaha Ciidanka xoogga Dalka ee Baardheere ayaa saxafadda u sheegay in ay iyagu weerar ku qaadeen halka ay ku sugnaayeen Al-Shabaab markii ay xog ka heleen Dadka degaanka.
“Dadka degaanka ayaa noo sheegay in Argagixisadu ay ku qasbaan in ay bixiyaan canshuur xoog ah, ciidankeenuna waa ay weerareen, iska hor imaad ka dib waannu ka racdeynay haklii ay Shacabka ku dhibaateynayeen, waxaanan halkaasi kaga dilnay Lix ,”ayuu yiri Taliyuhu.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in Ciidanka xoogga ay halkaasi kaga gubeen Kooxda Al-Shabaab Laba Gaari oo nooga dagaalka ah.
Mulki Afrax oo ka mid ah Dadka ku dhaqan degaannada hoos taga Baardheere ayaa Wakaaladda Wararka ee Xinhua u sheehtay in ay u yimaddeen Malleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab, iyagoo amray in ay qasab ku siiyaan Canshuuro , balse ay durbadiiba si deg-deg ah halkaasi ku gaareen Ciidanka Dowladda.
Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliya ayaa sare u qaaday howl-gallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyaga oo kaashana Shacabka ku dhaqan degaannada ay Malleeshiyaadku ku dhuumaaleystaan.